Saraakiil Iiraaniyiin Ah Oo Lagu Dilay Suuriya. – Calamada.com
Saraakiil Iiraaniyiin Ah Oo Lagu Dilay Suuriya.
calamada April 10, 2018 1 min read
Warbaahinta dowladda shiicada ah ee Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil Iiraaniyiin ah ay kamid noqdeen dadka ku dhintay duqeyn diyaaradaha maamulka Yahuudda ay ku garaaceen garoonka Tiifoor ee gobolka Ximis ee wadanka Suuriya.
Wakaaladda Faaris ayaa war ay maanta daabacday waxay ku sheegtay in 3 Sarkaal oo uu ku jiro korneel sare oo katirsan ciidamada ilaalada kacaanka ay ku geeriyoodeen duqeynta maamulka Sahyuuniyadda uu ku garaacay garoon ku yaala dalka Suuriya.
Goor dambe ayay wakaaladdu waxay hadana sheegtay in dhimashadu ay gaareyso illaa iyo 4 sarkaal, oo ay ku sheegtay iney kamid ahaayeen ciidamada difaacaya qabriga Sayida Zeynab, waa sida ay iyagu hadalka u dhigeene.
Maalintii Isniinta ayay ahayd markii diyaaradaha maamulka Yahuudda dhowr gantaal ay ku dhufteen saldhig lagu magacaabo Tiifoor oo ku yaala gobolka Ximis, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan Nidaamka nuseyriyada Bashaar Al-Asad.
Previous: Kolanyo American,Kenyaati Iyo Somali Isugu Jirta Oo Lagu Weeraray Jubbada Hoose.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 24-07-1439 Hijri.